Iitatoo zoqobo apho ukuxubana kunye nokungaxubeki kuxubeke | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Kudlulile amagcisa ahlukeneyo ejongene nala malungu ngamaxesha athile ukusishiya simangalisiwe yindlela yakhe, njengoko isenzeka kunye no-Okan Uçkun, Umculi weTurkey tattoo onesitayile esihle sokusa kwezinye iintlobo zokugqitywa kunye neemilo zoqobo kunye nemibono.
Akululanga ukufumana amagcisa tattoo adibanayo Uhlobo lwakho, into ehlala ihlawulwa yona. Isibini segcisa likaJade Tomlinson kunye noKev James ovela kwiLiso eliNwetshiweyo bazisa umoya omtsha kunye nembono yokujonga kule ndawo yeetattoo kunye noyilo lwazo olwahlula amandla abo kwisitayile sabo se cubist.
Esi sibini saseLondon sisebenzisa iinkalo ezahlukeneyo ukuya kubugcisa basezidolophini ukuya kwimifanekiso eqingqiweyo enje ngokuprinta ngokwabo, kodwa okwahlukileyo kukuba isitayile eso esahlukileyo nesahlukileyo esizenzela ezazo iindlela zokusebenzisa iseyile yomntu kwimisebenzi yeinki.
Ngokudibanisa izinto ezahlukeneyo ezingafakwanga kunye nokutshiza kombala kunye nembalwa iinkcukacha zobugcisa, iziqwenga zakhe zenza indlela yoqobo yokusondela kule tattoo.
Umnqweno wakhe kukudala iziqwenga ezizezinye zazo "ezizimeleyo" kwaye ezinxulumene neengcinga kunye namabali abonelelwa ngabaxhasi bakhe. UTomlinson noJames banikwe isithuba sokuguqula o «Guqula ngokwendalo» itattoo Ukusuka kwintoni ukuzoba ephepheni kude kube ekugqibeleni kubonisiwe nge-inki kulusu. Yiyo loo nto bethatha kwi-surrealism kunye ne-cubism yintoni efunekayo ukuze bakwazi ukuyichaza loo tattoo ifunwa ngumthengi, ewe, ngochukumiso lwayo olukhethekileyo oluchaza umvambo.
Uyazi wonke umsebenzi wakhe kusuka iwebhusayithi yakho y facebook wakho Ngubani onokudibana naye ukuze ume eLondon kwaye ube ne-tattoo ekhethekileyo kwiinyanga ezimbalwa ezizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » ICubism kunye ne-surrealism exutywe kwezi tatto